विकास भनेको झोलामा ल्याउने चिज होईन : प्रेम पौडेल, संयोजक विवेकशील रसुवा::Nepalese News Portal
आमा रत्नकुमारी र बाबु खुवाप्रसाद पौडेलका कान्छो छोरा प्रेमप्रसाद पौडेल वि.सं. २०३९ असार २० गते कालिका गाउँपालिका ४ मा जन्मिएका हुन् । वि.सं. २०७३ पुसमा नेपाली काँग्रेस पार्टी रसुवा—काठमाण्डौ सम्पर्क मञ्चको अध्यक्षसमेत रहेका पौडेल २०७४ चैत्र माहिनाबाट विवेकशील साझा पार्टीमा आवद्ध भएका हुन् । उनी ०७४ साउन १९ गतेदेखि विवेकशील साझा पार्टी, रसुवाका जिल्ला संयोजकको जिम्मेवारीमा छन् । राजनीति गर्नेहरु उत्पादन र श्रममा नजोडिदा राजनीति नै भ्रष्ट हुन्छ भन्ने बिचारलाई आत्मसात गर्ने उनी ०६२ सालदेखि काठमाण्डौ स्वयम्भूमा घर सजावटका समानहरूको व्यवसाय संचालन गरिरहेका छ । उनी पौडेलसंग सप्तकुण्ड साप्ताहिकले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीका प्रमुख अंशहरू :
तपाईको दृष्टिकोणमा राजनीति के हो ?
राजनीति भनेको समाज परिर्वतन गर्ने माध्यम हो । जुन माध्यममा रहेर विभिन्न राजनीतिक दल र पार्टीमा राजनीति गर्दछन् । देश विकास, सामाजिक विकासलाई उद्गम् विन्दुमा पुर्याउने अठोट गर्दछन् र देशको विकास, भौगोलिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास भनेकै राजनीतिको शुरूवात हो । यसरी समग्र रुपमा मुलुकको विकासमा प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले समाजमा राजनीतिको छुट्टै महत्व छ । त्यसैले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि सहि नेतृत्व गर्ने विचारसहितको सांगठनिक गतिविधि नै मुलभूत रुपमा राजनीति हो ।
समाज, देश परिर्वतनका लागि त राजनीति भन्दा बाहिर बसेर पनि योगदान गर्न सकिन्छ । समाज परिर्वतनका लागि राजनीति नै गर्नुपर्छ र ?
सामाजिक काम गर्न र सामाजलाइ उन्नत बनाउन एउटा पार्टीमा आवद्ध हुनैपर्छ । व्यक्तिगत तवरबाट सामाजिक काम गर्न सकिन्छ, थोरै पैसा कमाएको छ भने डोनेशन गर्न पनि सकिएला । अस्पतालमा भर्ना भएका विरामीलाई सहयोग गर्न सक्छौ तर त्यस्तो गरेर मात्र देश विकास गर्न सम्भव छैन । विश्व राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने अति सवल र विकशित राष्ट्रहरू पनि सहि राजनीति विना सफल भएको देखिंदैन । एउटा राष्ट्रलाई सु—संस्कृत राजनीति लगेर देशको विकास सु—संस्कृत ढंगबाट गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिमा आवद्ध हुन मैले जरुरि देखेको छु । तर राजनीति व्यापार र व्यवसाय भन्दा अलग पाटो हो । यदी व्यापार व्यवसायलाई राजनीतिमा जोडिन्छ भने त्यहा केही चिज दोहन गर्न खोजिएको छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । जसले गर्दा यदि त्यहा राजनीति सु—संस्कृत हुँदैन भने त्यो राजनीतिले देशमा राज्य दोहन गर्ने व्यक्ति मात्र खडा गर्छ जस्तो लाग्छ ।
सवै पार्टीको उद्देश्य त राष्ट्रलाई सु—संस्कृत र समुन्नत बनाउने भन्ने नै देखिन्छ तर पुरानो राजनीतिक पार्टीलाई छोडेर विवेकशील साझा पार्टी नै किन रोज्नु भयो ?
नेपालमा २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र २००७ सालमा नेपाली काँग्रेस पार्टी स्थापना भयो । पार्टीहरू राणा फ्याक्न, २०१७ सालमा फेरी तत्कालिन राजाले कू गरे देशमा निर्दलिय व्यवस्था, २०४६ सालमा फेरी सवै दल मिलेर निर्दलिय प्रजातन्त्र ढाल्नका लागि, ०५१ सालमा जनयुद्धमा माओवादी आए राजा ढाल्न, २००६ सालदेखि २०७५ सम्म हेर्नुस् ६९ वर्षसम्म नेपाल बनाउनलाई भनेर कुनै पार्टी जन्मे मात्र ढाल्नलाई मात्र जन्मे । एकले अर्कोलाई ढाल्ने अचम्मको राजनीति, नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा पनि आफै सरकार ढाल्दिने र नेपाली काँग्रेस सरकारमा हुँदा पनि काँग्रेसले नै आफ्नै प्रधानमन्त्री ढाल्दिने भएपछि नेपालको ६९ वर्षसम्मको राजनीति इतिहास हेर्दा एक अर्कालाई ढाल्नमै खर्चिएको देखिन्छ । हामी विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्र बनाउन, सु—संस्कृत राजनीति गर्न आएका छौ, ढाल्नलाई होईन । हामी सु—संस्कृत राजनीति युरोपियनहरूको जस्तै अष्ट्रेलिय, नर्वे, फिन्डल्याण्ड देशको जस्तो राजनीति गर्न आएको हौँ । जसमा समावेशीता, सुसज्जित, सु—संस्कृत राजनीति र समतामुलक समृद्धिका लागि देश बनाउन विवेकशील साझा पार्टी रोजेका हौं ।
यो विवेकशील साझा पार्टी र अन्य पार्टीमा के फरक छ ?
कल्याणकारी लोकतन्त्र हाम्रो लागि दर्शन हो । कल्याणकारी लोकतन्त्रमा सु—संस्कृत राजनीति र समतामुलक समृद्धिका लागि इमान्दारिता हुन्छ । यसमा रहेर हामीले देश र जनतालाई गर्नुपर्ने कर्तब्य निष्ठा र इमान्दारितामा रहेर राजनीति गर्छौं । अन्य पार्टी भन्दा फरक यही नै हो । हामी ईमान्दार भएर काम गर्छौं । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सभाको निर्वाचनबाट हामीले देशभारबाट दुई लाख तेह्र हजार मत ल्याएको कुरा बिदितै छ । पुरानो पार्टीहरूलाई पनि पछि पारेर पार्टी दर्ता भएको एक डेढ वर्ष यस्तो परिणाम ल्याउनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । प्रदेश नम्बर ३ को तेस्रो दल भएको छ । रसुवामा हामि पैसाको राजनीति अन्त्य गर्न आएका हौ ।
मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिंदै समृद्धि र विकासको यात्रामा अगाडि बढ्न र समग्र मुलुकको नेतृत्व गर्न लागि त राजनीतिक बैचारिक रुपले पार्टीको लाईन क्लियर हुनुपर्छ । तपाईहरूको पार्टीको लाईन के हो ?
मैले पहिला नै भनेको छु नि, हाम्रो पार्टीको लाईन नै कल्याणकारी लोकतन्त्र हो, इमान्दारिता र उत्कृष्ठता त्यही हो हाम्रो लाईन । तपाईले आफ्नो गाउँ ठाउँ आफै विकास गर्ने, आफै बनाउने त्यसकालागि हामीले केही विचार र प्रविधिहरू दिने हो । अहिले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई हेरौ उहाँ कति शिक्षित हुनुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीलाई वहाँको कार्यालयका निजी सचिव राजनीतिक दलले सिफारिस गरिएको कर्मचारीसँग कति दर्शन छ ? कति शिक्षित छन् ? कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सवालमा मेरो पार्टी र उसको पार्टी भनेको छ, कुन चाहि सक्षम र उत्कृष्ठ कर्मचारीले ठाउँ पाएको छ ? त्यही चीज हो, उत्कृष्ठ र इमान्दारहरूलाई ठाउँ ठाउँमा विवेकशील साझा पार्टीले व्यवस्थापन गर्ने । सवै इमान्दार भए पछि त बेइमानी नै रहेन अनि देश बन्छ ।
नेकपा र नेपाली कांग्रेस पार्टी लगायतका पार्टीको लामो संघर्षबाट नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र संघीय सविधान जारी भई अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । अहिले देश विकास र समृद्धि तिर अग्रसर छ भनिन्छ, यस्तो अवस्थामा फेरी नेपाली जनतालाई किन नयाँ पार्टी चाहियो ?
मैले पहिला पनि तपाईलाई अनुरोध गरी सकेको छु पुराना पार्टीहरू एकले अर्कालाई ढाल्ने र षड्यन्त्रका खेलहरू खेल्दै आएका छन् । नयाँ संविधानप्रति आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायत कहाँ खुसी छन र ? मुलुकी ऐन प्रति चिकित्सक, पत्रकार, श्रमजीवि वर्ग सवै असन्तुष्ट छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले देशलाई कसरी विकास र समृद्धि तर्फ लैजान सक्छन् ? कर्मचारी नियुक्ति हेरौ, मेरो र उसको पार्टी भनेर राखेका छन् । उत्कृष्ट कर्मचारीले ठाउँ पाएका छैन ? निश्पक्ष काम गर्न दिईएको छैन । इमान्दर कर्मचारी बिना कसरी देश विकास हुन्छ । अव पुराना पार्टीले यस्ता कुराहरूमा सुधार गर्न सक्दैनन् । र गर्दैनन् । त्यसैका लागि यो देशमा सवै क्षेत्रमा सु—संस्कृत राजनीति स्थापना गर्दै इमान्दारहरूलाई ठाउँ ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न विवेकशील साझा पार्टी इमान्दरिता साथ काम गर्छ यसका लागि विवेकशील साझा पार्टीको आवश्यकता छ ।
पुराना पार्टीहरूले जनता चाहान अनुसार काम गर्न सकेनन् भनेर संघ, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानु भयो, तर तपाईको पार्टीलाई त जनताले त्यति पत्त्याएको देखिएन नि ?
कसरी पत्याएन ? पार्टी दर्ता भएको एक डेढ वर्षको कम समय मै हामीले दुई लाख तेह्र हजार मत ल्यायौ । पुरानो पार्टीहरूलाई पनि पछि पारेको छ । थोरै समयको अन्तरालमा प्रदेश नम्बर ३ मा तेस्रो दल भयो । प्रदेश नम्बर ३ मा सामानुपतिक सिट अन्तर्गत केही प्रदेश संसद समेत छन् । निर्वाचन पश्चात पनि अन्य पार्टी छोडेर हाम्रो पार्टीमा आवद्ध हुनेको संख्या बढेर गएको छ । अव जनता माँझ विवेकशील साझा पार्टीको बारेमा बुझाउने मौका छ, अर्को पटक हाम्रो उपस्थिती सरकारमा हुनेछ ।
निर्वाचन अगाडि निकै तामझाम र हल्लाखल्ला गरेर पार्टी बनाउनु भयो तर पछिल्लो समय तपाईहरूको कुनै खास गतिविधि नै छैन । पार्टी कमजोर बन्दै गएको हो ?
पार्टी कमजोर भएको होइन । अहिले हामीले सांगठनिक विकास आधुनिक ढङ्गबाट कसरी गर्ने भनेर मुलुकभर संगठन विस्तारका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रममा चलाएका छौं । ७७ वटै जिल्लाका साथीहरूलाई काठमाडौँमा प्रशिक्षण भई सकेको छ । अनि गाउँगाउँमा संगठन विस्तार गरिरहेको छ र डेढ वर्ष भित्र महाधिबेशन गर्ने त्यसपछि महाधिवेशनबाट छानिएर गए पश्चात अर्को चार वर्ष पछिको निर्वाचन जाने र आगामी निर्वाचनमा दोस्रो पार्टी बन्ने वा सरकारमा सहभागी हुने र १० वर्ष भित्र हाम्रो सरकार बनाउने सोचका साथ हामी काम गरी रहेका छौ ।
अर्को निर्वाचनमा जित्ने गरी जनतावीच के कस्ता काम गर्नु हुन्छ, नित्ने आधारहरू के ?
जनताले जिताउने आधार भनेको हाम्रो इमान्दारिता, स्पष्टता र दृढता नै हो । भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधि हामि संचालन गर्दैछौं । अहिले तपाईले देख्नु भएको संघीय संरचना चरम भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । पहिले गाउँ विकस समिति हुन्थ्यो, गाउँगाउँमा विकास वजेट जान्थ्यो तर अहिले हेरौ गाउँ विकास समितिलाई वडास्तरमा झारेर ठुलोस्तरमा गाउँपालिका बनाएको छ र वजेटलाई सेन्ट्रालाइज गरेर चरम भष्टाचार भईरहेको छ । त्यो चिजलाई २०७६ साल पछि पार्टी महाधिधवेशन सकेपछि स्थानीय तहमा भईरहेको भ्रष्टाचारलाई निगरानी, खबरदारी र विरोधका कामहरू गर्छौ । राज्य दोहन गर्न मिल्दैन । बजेट कसरी बैज्ञानिक तवरबाट विनियोजना गर्ने र खर्च गर्ने विषयमा शिक्षित गराउछौ, वजेट कसरी चुहवाट भईरहेको छ भन्ने बारेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जनतालाई शिक्षित गराउछौ, त्यसो गरे हामी सफल हुन्छौ । देशमा नयाँ संविधान आयो, मुलुकले परिवर्तन पायो तर राजनीतिक दलका नेता पुरानै अनुहार आए । अहिलेको नयाँ संघीय संरचनामा वडा गाउँपालिकादेखि, प्रतिनिधि सभा सदस्यसम्ममा हेर्नु नयाँ संरचना तर पुरानै अनुहार छ । उनीहरूले विगतका गरिरहेका व्यवहार र अहिले गरिरहेका व्यवहारले गर्दा पनि जनताले हामीलाई सफल बनाउछ ।
रसुवामा विवेकशील साझा पार्टी संगठनिक अवस्था कस्तो छ ? कति जनाले पार्टीको सदस्यता लिएका छन् ?
रसुवा जिल्ला अहिले विवेकशील साझा पार्टीमा सिद्धान्त, उद्देश्य बुझेका केही सिमित युवाहरू मात्र संगठित भएको अवस्था छ । सांगठनिक अभ्यासको कुरा गर्दा हाम्रो जिल्लाबाट पार्टीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनाबाट ३ सय २२ मत प्राप्त भयो । निर्वाचन पछि सगठन निर्माण अभियानले ठुलो गति लिएको छ । अहिले पार्टीमा १५ सय जना जति साथीहरू जोडिएका छन् । हामी सदस्यहरुको वेबसाइटमा फोटो सहितको विवरण राख्ने तयारीमा छौं । यसबाट को को पार्टी सदस्य हो ? भन्ने अरूले हेर्नसमेत सक्नेछन् । अहिले रसुवामा पहिलो चरणमा पार्टी कमिटी गठन भएको छ । दोस्रो चरणमा जिल्ला तदर्थ समिति बनाउछौ । हामी अहिले फैलिदैं रहेको राजनीतिक पार्टी भएकोले टप टु बटमको अवधारणामा छौ । दुई प्रदेशको संयोजक फाइनल भएको छ । केही दिन भित्रै ५ वटै गाउँपालिकाहरूको संयोजक तोक्दै छौ । कालिका गाउँपालिका वडा नं. ४ मा झै कमिटी गठन गरिसकेको छौं । अब लगतै २७ वडामा कमिटी बनाईसक्ने सोचमा छौं ।
रसुवामा आजै पनि दुर्गम भेगका जनतालाई विवेकशील साझा पार्टी पनि छ भनेर जानकारी नै छैन । अव जनताबीच पार्टीलाई बैचारिक र संगठनिक रुपले बलियो बनाउँन के कसरी जाने योजना बनाउनु भएको छ ?
संगठन निर्माण र बैचारिक प्रशिक्षण लगायतका कुरालाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउने सोच छ । त्यसैका लागि हामी सबै साथीहरू जिल्लामै छौ। जिल्लाको एक मात्र पत्रिका सप्तकुण्ड साप्ताहिकबाट विवेकशील साझा पार्टीको तराजु चिनाव चिन्ह लिएर आउछु । तराजु भनेको एक्युरेसी र ब्यालेन्स हो । अधिकार र न्यायको अबधारणा राजनीतिमा मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रमा ब्यालेन्स गर्न हामी आएका हौ । यहाँहरूको गाउँ, ठाउँमा आउछौ । मैले बुझेको छु, रसुवाको २७ वडा मध्ये नौ, दश वडामा अझैपनि विवेकशील साझा पार्टीबारेमा थाहा छैन । हामी अव ९० दिन भित्रै ती सवै वडामा गएर पार्टी बारेमा बुझाउने छौ ।
समृद्ध रसुवा बनाउन विवेशील साझा पार्टी कसरी प्रस्तुत हुन्छ । केही योजना बनाउनु भएको छ ?
समृद्ध रसुवा बनाउने हाम्रो अठोट र योजना छ । जिल्लाका बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई राखेर कुन ठाउँको विकास गर्न हामी कसरी अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ ? भन्ने बारे छलफल गराएर त्यो अनुसारको आफ्नो दक्षता, क्षमता भएका व्यक्तिलाई अघि बढाएर विकासमा लाग्छौ। बुद्धिजीवी सर्कल जसले काम गर्ने अवसर पाएको छैन । त्यस्तो बुद्धिजीवी तहलाई मिलाएर विकासमा सहभागी हुने अवसर प्रदान हुन्छ । विकास भनेको झोलामा ल्याउने चिज होईन । हामीले गाउँ, ठाउँका समस्यलाई बैज्ञानिक तवरले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याई आफ्नो गाउँ आफैले बनाउने विकासको शुरूवात गर्ने छौं । देशको बजेटलाई सही तरिकाले तर्जुमा कसरी गर्ने हो, त्यसबाट एक सय होईन एक सय दश प्रतिशत काम गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ प्रविधीको उपयोग गरेर विकास योजना हामीसँग छ ।